गर्मीमा के–के खाने? | गृहपृष्ठ
Home स्वास्थ्य र जीवनशैली गर्मीमा के–के खाने?
गर्मीमा के–के खाने?
यति बेला नेपालमा मध्य गर्मी छ । गर्मीयाममा खानेकुरामा निकै सचेत हुनुपर्छ । विशेषगरी राति खाने खानामा बढी ध्यान दिनुपर्छ, ता कि निद्रा तथा पेटसम्बन्धी कुनै प्रकारको समस्या नआओस् । गर्मीको समयमा धेरै पटक खाना खानाले असजिलो महसुस हुनुका साथै राम्रोसँग निद्रा नलाग्न सक्छ । गर्मीमा राति खाँदा स्वास्थ्यमा लाभ पुग्ने खाद्यपदार्थबारेमा जानिराख्नुपर्छ । यस्ता खाद्यपदार्थको सेवनले शरीरमा शक्ति र तरलताको मात्रा पूरा गर्न सघाउ पुग्छ । गर्मी मौसममा लाभदायी खाद्यपदार्थबारे मदन लामिछानेले तयार पारेको एक रिपोर्ट :